I-Android Pie iza kwiXiaomi Mi 6 ngohlaziyo olutsha | I-Androidsis
I-Android Pie iza kwiXiaomi Mi 6 ngohlaziyo olutsha
El Xiaomi Mi 6 yi-smartphone eyaphehlelelwa ngaphezulu kweminyaka emibini edlulileyo, ngo-Epreli 2017. Nangona sele ligqala kwintengiso elafika njengeliphezulu kunye ne-Snapdragon 835 SoC, ayilityalwanga ngumenzi waseTshayina, kwaye oku ubonakalisiwe enkosi uhlaziyo olukhulu lwesoftware entsha oyifumanayo.
La Inguqulelo yehlabathi jikelele ye Android Pie Ivela kwiphakheji ye-firmware esisingisele kuyo kulo msitho, njengoko inguye osasazwa nge-OTA kuyo yonke iMi 6. Oku kubonisa utshintsho olukhulu kunxibelelwano lweselfowuni, kunye namanye amacandelo alo.
Inguqulelo ye-MIUI ihlaziywa ngolu hlaziyo lutsha, ewe. Kananjalo, kuyenzeka oko I-MIUI V10.4.1.0.PCAMIXM. Ukongeza, njengoko iyi-firmware ezisa utshintsho olomeleleyo kunye nezongezo, inobunzima obuyi-1.6 GB. Asithethi ngezinto ezintsha ezinqabileyo, kodwa ngokuchaseneyo, kwaye enye yazo sisixhobo seDigital Wellbeing, esiya kusivumela ukuba silinganise ukusetyenziswa esikunikezela kwisicelo ngasinye, kunye nomnxeba ngokubanzi, kwaye sizilinganisele ukuba kunjalo siyayifuna; Olunye lwezona zinto ziluncedo kwiPie ye-Android, izandla phantsi.
Kusenokwenzeka ukuba olu luhlaziyo lokugqibela lobu bukhulu obufunyanwa yiXiaomi Mi 6. Ngapha koko, yile nto ilindelweyo. Kwangelo xesha, kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba i-inshurensi yazo zonke iifowuni kwihlabathi liphela, njengoko sijongile ekuqaleni. Nangona kunjalo, isenokungafikeleli kuye wonke umntu ekuqaleni, kwaye isenokuba kungenxa yokuba isasazwa ngokuthe ngcembe, njengoko kuhlala kunjalo. Ke, ukuba kunjalo, hlisa umoya, uya kuyifumana ngeyure, kwiintsuku ezimbalwa okanye, ubuninzi, kwiiveki ezimbalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Android Pie iza kwiXiaomi Mi 6 ngohlaziyo olutsha
Ukulindela kuphezulu: Imbeko ilindele ukuthengisa ngaphezulu kwe-20 yezigidi zeeyunithi ze-Honor 9X duo entsha
Isikhangeli seIntanethi seSamsung sihlaziyiwe saya kwi-9.4 ngomphathi wesaziso kunye nokunqamla igama